रसिया र चीनले चंद्रमा कालोनी निर्माण गर्ने छ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
फेब्रुअरी 25, 2021 फेब्रुअरी 25, 2021 क्रिस्टिना किटोवा एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, चीन, चीन फ्रिल्यान्सिंग ग्लोबल गिग, चीन थोक र B2B, ग्लोबल विश्व, भारत, भारत फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, भारत थोक र B2B, समाचार लेख, रूस, रूस फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग्स, रूस थोक र B2B
चन्द्र कालोनी को डिजाइन चीन द्वारा विकसित गरीएको छ।
अन्य देशहरू आफ्नै चन्द्र औपनिवेशहरू चाहन्छन्।
अर्को युद्ध अन्तरिक्ष मा हुन सक्छ।
अन्तरिक्ष गतिविधिहरूका लागि रोजकोसमस स्टेट कर्पोरेशन (ROSCOSMOS) रूसी संघको लागि विस्तृत क्षेत्र र अन्तरिक्ष उडानहरू र कोस्मोनॉटिक्स कार्यक्रमहरूको प्रकारहरूको लागि जिम्मेवार एक राज्य निगम हो।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने त्यहाँ रूसी भौतिकशास्त्रीहरु द्वारा चन्द्र कॉलोनीको डिजाइनको बारेमा प्रस्ताव आएका थिए। एक रूसी वैज्ञानिक, अलेक्ज्याण्डर मेबरोडा, रोस्तोव-डोन-मा अवन्त परामर्शका निर्देशकले उनको ईन्जिनियरि। समाधान प्रस्ताव गरे।
उनीसँग अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित असंख्य पेटेन्टहरू छन्। सबैभन्दा भर्खरको एक "अन्तरिक्षमा कार्गोहरू पुर्‍याउने विधि र उही कार्यान्वयनको लागि एउटा प्रणाली।" चन्द्र आधार एक अपकेंद्रित्र, जसले पृथ्वी जस्तो गुरुत्वाकर्षणको स्तर अनुमति दिन्छ.
रोजकोस्मोसले यसअघि नासालाई नजिकैको चंद्र-भ्रमण गरिएको स्टेशन निर्माण गर्न सहयोग गर्न अस्वीकार गर्‍यो। जे होस्, रोजकोसमस चीनको साथ मिलिए चंद्र स्टेशन परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ।
नोभेम्बर २०१ In मा, रोजकोसमस र चिनियाँ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशनले २०१-2017-2018२०२२ देखि अन्तरिक्षको क्षेत्रमा सहयोगको एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरे।
कार्यक्रममा sections खण्डहरू समावेश थिए:
चंद्र र गहिरा ठाउँ अन्वेषण।
अन्तरिक्ष विज्ञान र सम्बन्धित टेक्नोलोजीहरू।
उपग्रहहरू र उनीहरूका अनुप्रयोगहरू।
तत्व आधार र सामग्री।
रिमोट सेन्सिंग डाटा, र अन्य शीर्षकहरूको क्षेत्रमा सहकार्य।
कार्यरत उपसमूहहरू रूस र चीनको अन्तरिक्ष एजेन्सीहरूमा सिर्जना गरिएको थियो।
यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय चन्द्र अनुसन्धान स्टेशन (ILRS) को लक्ष्य २० 2030० सम्ममा चन्द्रमामा दीर्घकालीन रोबोटिक उपस्थिति स्थापना गर्नु हो। यसले अन्ततः एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापना गर्दछ। डिसेम्बर १ 1972 XNUMX२ देखि मानिसहरूले चन्द्रमामा खुट्टा राखेका छैनन्, जब ह्यारिसन स्मिट र जेन सेर्ननले आफ्ना पदचिह्नहरू छोडे अपोलो १ mission मिशनको बखत.
नेशनल एयरोनटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन युएस फेडरल सरकारको एक स्वतन्त्र एजेन्सी हो जुन नागरिक अन्तरिक्ष कार्यक्रमको लागि जिम्मेदार छ, साथै एयरोनटिक्स र अन्तरिक्ष अनुसन्धानको लागि। नासाको स्थापना १ 1958 XNUMX मा भयो, एयरोनॉटिक्सका लागि राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिको सफलता पछि।
दुबै देशहरूले आउँदो चिनियाँ मिशन— चांग 6,,, — र the— र रूसी अनुसन्धान, लुना २ starting बाट सुरु गरी अनुसन्धान गर्ने छन।
रसिया र चीनले चन्द्रको दक्षिणी ध्रुवमा पहिलो मानव-साझेदारी प्लेटफर्मको निर्माण र सञ्चालन, दीर्घकालीन, ठूलो स्तरका वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्राविधिक प्रयोगहरू र चंद्रको विकास र प्रयोगलाई सहयोग पुर्‍याउन चन्द्र आधारको प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छन्। स्रोतहरू। ”
चीन र रसियाको योजना छ कि २०2030० को शुरुमा आईएलआरएसको विकासले सैद्धान्तिक रूपमा चन्द्रमामा छोटो चालक मिशनहरूको सम्भावनाको साथ दीर्घकालीन रोबोटिक उपस्थितिलाई आधार प्रदान गर्दछ।
दीर्घकालीन मानव उपस्थितिलाई संरचना गर्ने योजनाहरू २० 2036 र २०2045 between बीचमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाहेक, अमेरिकाले एक चन्द्र कॉलनी स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। थप रूपमा, भारत आक्रामक रूपमा अन्तरिक्षमा आफ्नो क्षमताहरू विचार गरिरहेको छ। तसर्थ, भारतले आफ्नै चन्द्र कॉलनी स्थापना गर्न चाहन्छ।
भविष्यमा, वास्तविक अन्तरिक्ष युद्ध हुन सक्छ। वास्तविकतामा, अमेरिका अन्तरिक्षको नियन्त्रणमा अटल छ। २०१ In मा, संयुक्त राज्य अन्तरिक्ष बल अमेरिकी सशस्त्र सेनाहरुको अन्तरिक्ष सेवा शाखा भयो, आठ अमेरिकी वर्दीकृत सेवाहरु मध्ये एक, र विश्वको पहिलो र वर्तमानमा मात्र स्वतन्त्र अन्तरिक्ष बल।
रूस र चीन अन्तरिक्ष अन्वेषणबाट पछाडि फर्कने छैन। अन्तरिक्षमा विश्व युद्ध III हुन सक्छ यो प्रशंसनीय छ।
चीन सांप्रदायिक समाचार भारत चन्द्र रूस स्पेस
२ विचार "रसिया र चीनलाई मून कालोनी बनाउन"
फेब्रुअरी 25, 2021 12 मा: 00 बजे
वास्तवमै चाखलाग्दो समाचार कथा। चन्द्रमाको कुनै पनि ठाउँमा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र स्थापनाको प्रभावहरुमा मलाई अलि घबराउँछ। त्यसले पृथ्वी / चन्द्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रमा कस्तो असर पार्दछ? सायद कुनै पनि होइन, यदि यो सानो ठाउँ हो भने। अझै पनि पृथ्वी महासागर ज्वार असर गर्दछ एक धेरै सन्तुलित गुरुत्वाकर्षण पुल हो।
क्रिस्टिना किटोवा भन्छन्:
फेब्रुअरी 27, 2021 1 मा: 36 हूँ
तपाईंको टिप्पणीका लागि धन्यबाद, म व्यक्तिगत रूपमा, त्यस्तो उपनिवेशमा बस्न चाहन्न, तर यो व्यवसाय लगानीको लागि पनि नयाँ भविष्य हो। ठूलो अन्तरदृष्टि